FARITRA DIANA : FAMETRAHANA NY JUNIOR REPORTERS CLUBS (JRC) – Ministère de la Jeunesse et des Sports
EPQ au niveau régional
FARITRA DIANA : FAMETRAHANA NY JUNIOR REPORTERS CLUBS (JRC)
9 septembre 2021 Non classé
Tanterahana ao Antsiranana, renivohitry ny Faritra Diana ny 6 hatramin’ny 11 septambra 2021 ny fametrahana sy fampiofanana ireo JRC miisa 30 mianadahy sy ireo coaches. Ny JRC dia zatovo sy tanora 12 hatramin’ny 18 taona mamokatra fandaharana miompana amin’ny zava-misy iainany.
Ho an’ny Faritra Avaratra dia mifantoka kokoa amin’ny fandriampahalemana ny fandaharana izay iaraha-miasa amin’ny Onjampeo RNM sy Radio Faniry Antsiranana.
Nisy ny fitsidihana ara-pomba fanajana nataon’ireo Delegasiona avy ato amin’ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena tany amin’ny Biraon’ny Talem-paritry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, ny Governoran’ny Faritra Diana, ny Préfet ary ny Talen’ny Radio Faniry anio. Marihana moa fa Andriamatoa RAKOTONIRINA Gervais, Talen’ny Kabinetra eo anivon’ny Minisiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana no mitarika izany delegasiona izany.
Isaorana ny UNICEF Madagasikara, ny Peace Building Funds sy ireo mpiara-miombon’antoka rehetra amin’ny fahatontosan’izao fandaharanasa izao ho fanamafisana ny fandraisana anjaran’ny zatovo sy ny tanora malagasy.
AMBOARAN’NY KAOFEDERASIONA : HIATRIKA NY LALAO MIVERINA ANY ZAMBIE NY CFFA
ATRIKASA HAMARITANA NY PAIKADY ENTI-MAMPIROBOROBO NY TANORA ETO MADAGASIKARA
FARITRA DIANA: FIOFANAN’NY JUNIOR REPORTERS CLUBS
Decret n°2021-865 Attributions du MJS